सम्भोगको अवधीमा जिस्किरहनुहोस वा शरीरलाई एकदमै नजिक राख्नुहोस्-सम्भोगको लागी श्रीमतीलाई लागि आकर्षित गर्ने तरिका « Npnews
सम्भोगको अवधीमा जिस्किरहनुहोस वा शरीरलाई एकदमै नजिक राख्नुहोस्-सम्भोगको लागी श्रीमतीलाई लागि आकर्षित गर्ने तरिका
१. सकारात्मक प्रतिक्रिया गर्न थाल्नुहोस्-
२. घरको काममा ध्यान दिनुहोस्-
३. अंगालो हाल्न सुरु गर्नुुस्-
४. सम्भोगको अवधीमा जिस्किरहनुहोस वा शरीरलाई एकदमै नजिक राख्नुहोस्-
५. उनको शरीरको तारीफ गर्नुहोस्-
जव यौनसम्पर्क गर्न थाल्नुहुन्छ यो भन्न छाडिदिनु होस् की, तिम्रो स्तन कति झोलिएको ? तिम्रो शरीर किन यति गिलो ? यो कति नराम्रो दाग ? तिमीले म वाहेक अरुसँग सहवास त गरेकी छैनौं नि आदि इत्यादि । यी कुराले उनीमा निराशा जगाउँछ । त्यसैले यौनसम्पर्क झर्किलो बन्दछ । (राजधानी दैनिकको सहयोगमा)